ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့လမ်း
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သမီးက“ အမေ၊ ကြောင်ကိုအသားအရေလှပစေတဲ့နည်းတစ်နည်းထက်မကရှိသလား” ဟုငါ့ကိုမကြာသေးမီကမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါရယ်တယ် ထိုစကားသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသူသိသည်။ သို့သော်သူမထိုဆင်းရဲသောကြောင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအမှန်ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့တစ်လမ်းထက်ပိုသောများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်တွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အဟောင်းအမေရိကန်ပါရမီရှင်ကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်“ လိုအပ်ချက်သည်တီထွင်မှု၏မိခင်ဖြစ်သည်” ဟူသောclichéရှိသည်။ အကယ်၍ ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်ဖုံးအုပ်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။
ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်ဘုရားသခင့်နည်းလမ်းတော်များအကြောင်းသင်ကြားပေးစဉ်အရာအားလုံးကိုရှုထောင့်သစ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ သူကစာကို (ပညတ္တိကျမ်း) မဟုတ်ဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်း၊ ပညတ်တရား၏စိတ်ဓာတ်ကိုပြသသည်။ သူကသူတို့ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တွက်ချက်ခြင်းနည်းလမ်းအစားချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသည်။ သူကသူတို့ကို (နှင့်ကျွန်တော်တို့ကို) ပိုကောင်းတဲ့လမ်းကိုဆောင်ခဲ့၏။
Paulus wiederholt das in seinem Brief an Timotheus: "Denn es gibt nur einen Gott und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist "(1. တိမောသေ 2,5). Dennoch gibt es immer noch manche, die nach anderen Möglichkeiten und Alternativen suchen. «Was? Sie können mir nicht sagen, dass es nur einen Weg gibt. Ich möchte frei sein, meine eigene Entscheidung zu treffen!»
များစွာသောသူတို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာဘာသာတရားများကိုကြိုးစားကြသည်။ အရှေ့လမ်းညွန်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များကြသည်။ အချို့သူတို့သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအတွေ့အကြုံရှိလိုသော်လည်းဘုရားကျောင်းမတည်ဆောက်ရသေးသည်။ တချို့ကမှော်အတတ်ကိုလှည့်ကြသည်။ ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရုံသက်သက်ထက်မကလုပ်ဖို့လိုသည်ဟုယူဆသောခရစ်ယာန်များရှိသည်။ ဒါကို "ခရစ်တော်ပေါင်း" လို့ခေါ်တယ်။